Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida iyo Sirdoonka Qaranka Somaliya, ayaa soo saaray awaamiir uu ku sheegay inay qayb ka tahay suggida ammaanka Magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida iyo Sirdoonka Qaranka Somaliya, ayaa soo saaray awaamiir uu ku sheegay inay qayb ka tahay suggida ammaanka Magaalada Muqdisho
C/raxmaan Maxamed Tuur Yare Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida iyo Sirdoonka Qaranka Somaliya, ayaa soo saaray awaamiir uu ku sheegay inay qayb ka tahay suggida ammaanka Magaalada Muqdisho, iyadoo xilligan ay muuqato fashil dhanka ammaanka ah oo haysta laamaha Sirdoonka Dowladda.
Taliyaha Nabad Suggida ayaa amray ciidamada NISA inay baaraan gaadiidka soo galaya Magaalada Muqdisho iyo kuwa ka baxaya, waxaana uu sheegay gaadiidka nooc waliba oo ay yihiin inay muhiim tahay ciidamada inay baaraan.
“Magaalada oo dhan waxaa laga soo gala Afar meel ilaa lixdameeyo jid cadde ayaa Magaalada soo gasha waa la soo xiray, Magaaladan nadiifin ayaa ka socota guri guri ayaa loo nadiifinooyaa ma rabo tubooyin wasaq ah inay ku furnaadaan, dadka ka hortagaayo tubooyinkaasi waa idinka, baabuurta Khudaarta wada waa la baaraa, gaar dameerada waa la baaraa, dadka 40 sano ka yar ee aadka looga shakiyo damiin ayeey ku soo galayaan Magaalada Muqdisho.” Ayuu yiri Taliyaha Nabad Suggida.
C/raxmaan Tuur yare oo sii waramaya ayaa ku amray ciidamada Nabad Suggida inay tirakoobaan gaadiidka ka shaqeeya Magaalada Muqdisho iyo Degmada Afgooye dhexdeeda, sidoo kalena ay soo qoraan taarikooyinka Baabuurtaasi.
Tuur Yare waxa kale uu sheegay ciidamada Nabad Suggida inta muuqato mooyaane in kale oo aanan muuqan inay shaqeeyaan, balse su’aasha dad badani isweydiinayaan ayaa ah maxay ciidanka uga warkeeni la’yihiin Qaraxyada Shabaabka ka hor inta aysan dhicin.?
Shabaab ayaa Axadii la soo dhaafay waxa ay weerar culus oo Khasaaro badan geystay ay ku qaadeen Hotelka Saxafi ee Magaalada Muqdisho oo Saraakiil iyo Xildhibaano ay ku dileen
Waxaa magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii w/maaliyada & w/maaliyadeed gobealeedyada